२३ प्रतिशत बढाइएकको भाँडाप्रति जनताको आपत्ति, तत्कालै यो निर्णय खारेज गरियोस् ! - Umanga Khabar::Umanga Khabar Nepali News Portal
काठ्माडौमा रहेको सार्वजनिक यातायात केन्द्र्ीय महासंघले उपत्यकाभित्र भाँडा बढाउनको लागि सरकारलाई दबाब दिन गत असोज १८ चलाएन । बाटोभरि भाँडाको गाडी तेस्याइएको थियो । गाडी नपाएर जनता पैदल यात्रा गर्न बाध्य भए । भाँडा बढाउने भन्दै सरकारको नियम नमानि यातायात व्यवसायीले दादागिरी देखाए ।
आफुखुसी भाडाँ बढाउने र गाडी लगेर बाटामा तेस्याउने यातायात व्यवसायीलाई सरकारले समातेन् । जनताले गाडी नचल्दा दुःख पाए । सरकारले यातायात व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुको साटो जनताले दुःख पाएको हेरेर बस्यो । सरकारसग तति नै आँट थियो भने यस्ता यातायात व्यवसायीको गाडीको रोड परमिट र दर्ता खारेज गरिदिनुपथ्यो ।
यातायात व्यवस्था विभागको डिजी गोगनबहादुर हमाल सरुवा हुनेबित्तिकै नवराज घिमिरे डिजी बनेर आए । घिमिरे विभागमा आउनेबित्तिकै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्र्यि महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र्नाथ कर्माचार्यले एउटा कार्यक्रममा बल्ल हामी व्यवसायीको वर्षौको माग सरकारले पुरा गर्ने भएको छ भनेका थिए ।
म पनि काभ्रेको बासिन्दा अहिलेका डिजी घिमिरे पनि काभ्रेको हामी जिल्लावासी । उहाँ र मेरो पहिल्यैदेखि राम्रो चिनजान छ । अबको केही दिनमा सार्वजनिक यातायातको भाँडा बढ्छ, बीस वर्ष गाडीको म्याद थपिनेछ, नँया ट्याक्सीको दर्ता खुल्दैन् भनेर उनले यातायात व्यवसायीको सामु भाषण दिए ।
कार्यक्रममा जम्मा भएकाहरुले कतिले त योगेन्द्र्को कृरामा विश्वास गरे । कतिपयले एउटा कानले सुने अर्काले उडाइदिए । यो भाषण योगेन्द्र् गत वैशाखको पहिलो साता दिएका थिए । उनले भाषण दिएको केही दिनमा नै विभागका घिमिरेले सार्वजनिक यातायातको २८ प्रतिशत भाँडा बढाउने टिप्पणी उठाएर मन्त्रालय पठाए स्वीकृतिको लागि ।
मन्त्रालयमा गएर सो भाँडा सम्बन्धी फाइल अड्केको थियो । केपी ओली सरकारको मन्त्रीले दशैंको मुखमा बढाउन हुदेन् जनता मारमा पर्छन् भनेर भाँडा बढाउने निर्णयलाई अड्काएको थिए । तर विभागको डिजीले मैले त २८ प्रतिशत भाँडा बढाएर पठाएको तर मन्त्रीले मानेनन् तपाईहरु आन्दोलनमा जानुस भनेको एक जना यातायात व्यवसायीले बताएका थिए । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्र्यि महासंघ र सार्वजनिक यातायात केन्द्र्ीय महासंघले यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाड.लाई दबाब दिन थाले ।
सार्वजनिक यातायात केन्द्रयि महासंघ एमालेका कार्यकर्ता हुन् । त्यस्तै, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्र्यि महासंघ काग्रेसका कार्यकता हुन् । भाँडा बढाउने छाँटकाँट नदेखेपछि सार्वजनिक केन्द्र्ीय यातायात महासंघका नेताहरु सिधै केपीतिर हान्निए ।
पुर्वप्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा विभागबाट गएको भाँडा बढाउने प्रस्ताव २०७८ असार २७ मन्त्रीले सदर गरे । असार २८ गते केपी ओलीको सरकार ढल्यो । केप ी ओलीले जनतालाई केही दिन नसकेपनि बढेको भाँडा उपहार दिएर गयो । यता, २८ प्रतिशत बढेको भाँडा असार २९ गतेबाट कायान्वयनमा आयो ।
विभागले बीस वर्षे गाडीको म्याद थप्नेको लागि टिप्पणी उठाएर मन्त्रालय पठाएको यातायात व्यवस्था विभागको एक कर्मचारी बताउछन् । यातायात व्यवस्था विभागको डिजी नँया ट्याक्सी खोल्ने सुरसारमा देखिएनन् । यही विषयमा उनलाई सोध्दा यही भएको ट्याक्सी त बढी भइसक्यो भनेर उनले व्यवसायीको पक्षमा रहेर जवाफ दिए ।
यदि यातायात व्यवस्था विभागको डिजी घिमिरेले २८ प्रतिशत भाँडा बढाउने भनेर मन्त्रालय नपठाएको भए अहिले भाँडा बढ्ने थिएन् । जनताले तेब्बर भाँडा तिरेर यात्रा गर्नुपर्ने थिएन् । मँहगीको मारमा फेरिपनि सर्वसाधारण नै परे । एउटा जिल्लावासी त्यहीमाथि पुराना सम्बन्ध जसको फाइदा व्यवसायीले उठाए ।
तर जनताले यसको भुक्तान गर्नुपरेको छ । आर्थिक लेनदेनमा सवार डिजीले कानुनविपरीत गएर २८ प्रतिशत भाँडा बढाए । सरकारले एकचोटि भाँडा बढाउँदा ५ प्रतिशतमात्र बढाउन पाउने कानुनमा उल्लेख गरिएको छ । डिजीको लेनदेनको कारण गतसाल १७ सय तिरेको बाटोमा यो वर्ष २५ सय तिर्नुपप्यो ।
विगत पल्टाउने हो भने अहिलेसम्म २८ प्रतिशत भाँडा बढेको छैन् । पहिले पनि डिजी आए, मन्त्री आए तर कसैले पनि यत्रो भाँडा बढाएनन् । बागमती प्रदेश सरकारले उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक साधनको यही असोज २५ गते २३ प्रतिशत भाँडा बढाएको छ ।
एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म १८ रुपिँया भनिएको छ । माइतीघरबाट बबरमहल ओर्लियो भनेपनि २० रुपिँया लिन्छ । आधा किलोमिटर यात्रा गरेको छैन् भाँडा भने बीस तिर्नपर्छ । जनताले भाँडाको गाडी नचढुन् भनेर सरकारले यस्तो अस्वाभाविक निर्णय गरेको हो ।
सरकारको पैसाको आडमा यातायात व्यवसायीलाई जनता ठग्ने बाटो खोलेको हो ? जनताले निजी गाडी किन्न सक्दैन् तिमीहरुलाई जति मनलाग्छ त्यति भाँडा लेउ भनेर यातायात व्यवसायीलाई अवसर बनाइदिएको हो ? आर्थिक कमजोर भएका सिधासाधी मानिसहरु सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्छन् । बिहानबेलुका हातमुख जोर्न गाहे पर्ने सर्वससाधारणहरुलाई सरकारले २८ प्रतिशत बढेको भाँडा उपहार स्वरुप दिएको छ ।
पनौतीबाट सल्लाघारी आएको पहिले ३५ रुपिँया थियोभने अहिले ६० रुपिँया तिर्नपर्छ । त्यस्तै, माइतीघरबाट पुल्चोक गएको अहिले २५ रुपिँया तिर्नपर्छ । एउटा यात्रुबाट यत्रो पैसा लिदाँ यसको अनुगमन खोइ ? जनताले तिरेको भाँडा सरकारले निर्धारण गरेको हो ? कि त यहाँपनि व्यवसायीलाई छुट दिइएको छ ।
अरु बेला एकदुई रुपिँया बढ्ने बाटोमा अहिले तीस रुपिँयासम्म बढेको छ । अनि जनता सिधै मर्नुपर्नेको स्थिति आएन । यातायात व्यवस्था विभाग भाँडा बढाउन चाहि सोच्दै नसोची अघि बढ्यो । तर जब अनुगमन गर्ने बेलामा खोइ विभाग ? ट्रफिक महाशाखा कँहा छ ?
यात्रुलाई यातायात व्यवसायीले लुट्नसम्म लुटेको छन् । तैपनि ट्रफिक प्रहरीहरुलाई अनुगमनमा खासै चासो छैन् । एउटा सार्वजनिक सवारीमा दैनिक दुई हजार यात्रु चढ्ने ओर्लेने गर्छन् । यत्रो यात्रु यातायात व्यवसायीहरुले ठगेको छन् । सिट भन्दा बढी यात्रु हालेको छन् ।
विधार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगलाई भाडा छुट दिदैनन् । त्यही पनि यिनीहरुलाई केलाई कारबाही गरिदैन् ? भाँडा लिष्टमा ट्रफिक महाशाखा र यातायात व्यवस्था विभागको फोन नम्बर केलाइ लेखिदैन् ? कतिपय सार्वजनिक यातायातमा त भाँडा लिष्ट ने छैन् ।
भाँडा लिष्ट पनि समितिको लेटरप्याडमा छ । समितिले तोकेको भाँडा राखेर भाँडा लिष्ट बनाएको छन् । यहाँपनि सरकार चुक्यो । भाँडाचाहिबढाइदियो एउटा भाँडालिष्टको व्यवस्थासमेत गरेन । यता, यात्रु ठग्ने सार्वजनिक सवारीलाई कारबाहीसमेत भएन् ।
एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म भाँडा १८ रुपिँया तोकिएको छ । यसलाई पनि सरकारले भागबण्डा लगाएन् । अब के एक किमि यात्रा गर्नेले गाडी चढ्नै छोड्दिनुपर्ने । एक किमि यात्रा गर्नेले त ४ रुपिँया ५० पैसा तिर्नुपर्ने होइन् र ? यहाँ ठुलो आर्थिक लेनदेन भएको छ ।
पैसा नखाई सरकारले यत्रो निर्णय गर्दै गर्दैन् । कि त भाँडा भागबण्डा गर्नपप्यो कि सरकारले बढाएको भाँडा तत्कालै फिर्ता गर्नुपर्छ । कहाँबाट कहाँसम्म कति किलोमिटर छ भनेर यात्रुलाई थाहा हुदैन् । सडक विभागले पनि सडकको दाँयाबाँया यहाँबाट यहाँसम् मयति किमि छ भनेर लेखेको छैन् ।
अनि एक किलोमिटर यात्रा गरेको छैन् भाँडा भने सिधै बीस रुपिँया । २०४९ सालको ऐनमा पैसा लिईसकेपछि टिकट दिनैपर्छ । तर यातायात व्यवसायीले टिकट नै दिदैनन् । यस्तो सवारी साधनलाई कारबाही गर्नुपर्देन् । जनता ठगेर खाऊ भनेर सरकारले यातायात व्यवसायीलाई छाडा छोडेको प्रस्ट रुपमा देखिएको छ ।